Isisombululo: avrdude: ser_open (): ayinakuvula isixhobo kwiArduino-Ikkaro
yokuqalisa >> Arduino >> Isisombululo: avrdude: ser_open (): ayinakho ukuvula isixhobo kwiArduino
Kule nqaku ndiza kuchaza indlela yokulungisa impazamo eqhelekileyo e-Arduino:
avrdude: ser_open (): ayinakho ukuvula isixhobo "/ dev / ttyACM0": Imvume iyaliwe
Emva kwexesha elide ngaphandle kokusebenzisa iArduino ndithathe iibhodi zam ezimbini (eyokuqala kunye ne Elegoo) ukwenza eminye imisebenzi nentombi yam. Ndizidibanisa, ndiza kufaka i-blink ukubona ukuba yonke into ilungile kwaye xa ndiyithumela ebhodini ibuyisa impazamo eyaziwayo.
IArduino: 1.8.5 (Linux), Ikhadi: "Arduino / Genuino Uno" avrdude: ser_open (): ayikwazi ukuvula isixhobo "/ dev / ttyACM0": Imvume iyaliwe Ingxaki yokulayisha ebhodini. Ndwendwela http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload yeengcebiso.
Zombini kwiPC yam nakwilaptop yam ndineBuntu 18.04 efakiweyo.
Ndiqala ngokulandela ikhonkco abacebisa ngalo. Kwaye ndilandela amanyathelo
En izixhobo / ipleyiti I-Arduino / Genuino Uno ikhethiwe
En izixhobo / uthotho lwezibuko / dev / ttyACM0
kwaye njengoko amaxwebhu ebonisa, ukuba kukho iingxaki ngabaqhubi kunye neemvume, ndivula i-terminal kwaye ndiphumeze:
apho Igama lomsebenzisi ligama lakho lomsebenzisi
Ngoku ndiphuma ndingena kwakhona. Kwaye xa kunokwenzeka ndiqale kwakhona iPC / ilaptop.
Ayikasebenzi kum kwaye amaxwebhu eArduino awasancedi. Ke ndiye ndahlala ndikhangela, kwiiforamu nakwiiblogi. Ukuba okwangoku ayisebenzi kuwe kwaye unjengam. Landela la manyathelo alandelayo
ls / dev / ttyACM0 ibuyisela / dev / ttyACM0
ls -l / dev / ttyACM0 ibuyisa i-crw-rw—- 1 ingcambu yokufowuna 166, 0 Nov 26 16:41 / dev / ttyACM
Ngale nto siyaqinisekisa ukuba izibuko likho
Siza kunika imvume kwaye sijonge ukuba umsebenzisi wethu uneemvume eziyimfuneko na.
Kwaye ndiyabona ukuba umsebenzisi uphakathi kweqela ukucofa Ke le nxalenye siyifumene ngokuchanekileyo.
Into endiyisebenzeleyo ibikukufaka kwakhona iArduino.
Kwaye ayibuyisi nantoni na ekubuyiseleni iArduino kufuneka ilungisiwe.
Kwaye ukuba khange ukwazi ukusombulula ingxaki, ndishiyele uluvo kwaye ndiza kuzama ukukunceda.
QAPHELA Isixhobo sokuSombulula ingxaki
Kukho i Iskripthi abalungiselele ukulungisa le ngxaki. Ungazama ukubona ukuba iyanceda na. Khange ndiyisebenzise kodwa ndiyishiya kuba ndicinga ukuba inokuba sisixhobo esisebenzayo.
Ndishiya ulwazi oluncinci ukuze ndiqonde ngcono ukuba yintoni i-AVRDUDE. Igama livela kwi-AVRDUDE-Isikhupheli se-AVR / i-UploaDEr
I-AVRDUDE sisixhobo sokukhuphela / sokulayisha / sokusebenzisa imixholo yeROM kunye ne-EEPROM yee-microcontroller ze-AVR zisebenzisa inkqubo ye-in-system programming (ISP).
I-AVRDUDE yaqalwa nguBrian S. Dean njengeprojekthi yabucala njengenkqubo ye-Atmel AVR yothotho lwee-microcontrollers.
Unokufumana isoftware kunye nolunye ulwazi ngakumbi kwifayile ye- iwebhusayithi yeprojekthi.
Amagqabantshintshi kwi "Solution: avrdude: ser_open (): ayinakuvula isixhobo kwiArduino"
UTshazimpuzi 1, 2020 ngexesha 1:02 am
Ndinengxaki ne-arduino enye ayinxibelelani ne-ide okanye ngokungafaniyo nayo yonke into ndiyilungiselele kakuhle, zonke iipleyiti zeport njl. Yintoni engalunganga, unokuba neenkcukacha ezithe kratya zokufaka kwakhona i-arduino enkosi ndimtsha koku
3 QAPHELA Isixhobo sokuSombulula ingxaki